တောင်ကုတ်တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ် မှောက်မှု ၁၄ ဦး သေဆုံး | ဧရာဝတီ
တောင်ကုတ်တွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ် မှောက်မှု ၁၄ ဦး သေဆုံး
ဧရာဝတီ| January 23, 2013 | Hits:3,258
| | ရန်ကုန်-တောင်ကုတ်-သံတွဲ ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို သယ်ဆောင်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဖိုးခေါင် / တောင်ကုတ်)
ရန်ကုန်-တောင်ကုတ်-သံတွဲ ပြေးဆွဲနေသည့် ခရီးသည်တင် အောင်သစ္စာ ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစီးသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ ရခိုင်ရိုးမ တောင်ခြေ၌ ချောက်ထဲထိုးကျသွားခဲ့ရာ နောက်ဆုံး အတည်ပြုနိုင်သည့် သတင်းအရ ခရီးသည် ၁၄ ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူ ၁၄ ဦးတွင် ကလေး ၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၆ ဦးနှင့်အမျိုးသား ၇ ဦးသေဆုံးပြီး သံဃာတော် ၃ ပါး အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၃၃ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရဲဇာနည် ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားထားသည်။
ဒဏ်ရာရသူ ၃၃ ဦးတွင် အတွင်းလူနာ ၁၇ ဦးပါဝင်ကြောင်း၊ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သည့် အတွင်းလူနာ ၁၂ ဦးကို သံတွဲဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး၊ တောင်ကုတ်မြို့ ဆေးရုံ၌ အတွင်းလူနာ ၅ ဦးကို ဆေးဝါးကုသ ပေးနေကြောင်း တောင်ကုတ်ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ လူနာအများစုသည် ခြေကျိုး၊ လက်ကျိုး၊ ခေါင်းဒဏ်ရာများ ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
အောင်သစ္စာကားသည် ယမန်နေ့ညနေတွင် ရန်ကုန်မှတောင်ကုတ်-သံတွဲ ဒေသသို့ ထွက်ခွာလာစဉ် တောင်ကုတ်မြို့နှင့်မိုင် ၃၀ ၀န်းကျင် ဝေးကွာသည့် ရခိုင်ရိုးမတောင်ခြေ နေပူတောင်၌ နံနက် ၃ နာရီ ၀န်းကျင်တွင် ချောက်ထဲသို့ ထိုးကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
မော်တော်ကား လမ်းလျှော် ချောက်ထဲကျသွားရခြင်းသည် ကားဒရိုင်ဘာ အိပ်ငိုက်နေသည့်အတွက်ဟု ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကမူ ကား ဘရိတ်ပေါက်သောကြောင့်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အောင်သစ္စာ ကုမ္ပဏီ (ရန်ကုန်-ရုံး) က ဖြေဆိုရာတွင်မူ မော်တော်ကား ဘီးပေါက်သွားသည့်အတွက် ချော်ကျ တိမ်းမှောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာရရှိပြီး တောင်ကုတ်ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် လူနာ ကိုဝင်းဇော်ကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သူ ကိုစည်သူလွင်က “ကျနော့်သူငယ်ချင်းက အခု သိပ်ပြီးတော့ စကားမပြောနိုင်ဘူး။ သူမှတ်မိသလောက် ကျနော့်ကို ပြောပြတာက ကားက ချောက်ထဲကို ဆင်းသွားတာပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဆင်းသွားတယ် ဆိုတာကိုတော့ မသိလိုက်ဘူး။ ဆင်းသွားတဲ့ အခါမှဘဲ သိလိုက်တယ်။ ကားက လမ်းထင်ပြီးတော့ ဆင်းသွား တာလား၊ ချောက်ကတော့ တော်တော်နက်ပါတယ်လို့သာ ပြောပါတယ်” ဆိုသည်။
ရန်ကုန်-တောင်ကုတ် ရခိုင်ရိုးမ မော်တော်ကားသည် ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်မြို့အလွန်မှစတင်၍ တောင်ကုတ် မြို့အထိ ပျက်စီးလျက်ရှိသည်။ သို့သော် ယခုကားတိမ်းမှောက် သည့်နေရာသည် လမ်းကောင်းမွန်ကြောင်း ဒေသခံတချို့က ဆိုသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ တောင်ကုတ် နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကြက်ခြေနီနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ရောက်ရှိ ကူညီနေကြောင်း သွားရောက်ကူညီရာတွင် ပါဝင်သည့် တောင်ကုတ်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းအောင်က ပြောသည်။
“တောင်အောက် တော်တော်နက်နက်ထဲကို ကျသွားတော့ အလောင်း စာရင်းပဲ ရသေးတယ်။ အလောင်းတလောင်း ကားလမ်းကို ပြန်ရောက်ဖို့ နာရီဝက်လောက်အထိ အချိန်ယူပြီး ထမ်းတင်နေကြရတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒဏ်ရာရတဲ့ လူတွေလောက်ဘဲ ဆေးရုံကို နောက်ကားကြုံတွေနဲ့ ရောက်လာနေသေးတယ်။ အလောင်းတွေကတော့ ညနေပိုင်းလောက်မှ ရောက်မယ် ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးမင်းအောင်က ဆိုသည်။
ရခိုင်ရိုးမလမ်း ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တောင်ကုတ်ဒေသခံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးကျောက်တောင်က နိုင်ငံတော် အစိုးရထံမှ ကျပ်သိန်းပေါင်း တသိန်းကျော်ဖြင့် လေလံဆွဲထားကာ လုပ်ဆောင်နေပြီး လမ်း၏ ခွန်ကောက်ခံသည့် လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။
ရန်ကုန်-တောင်ကုတ်-သံတွဲ ပြေးဆွဲနေသည့် မော်တော်ကားလိုင်း စုစုပေါင်း ၂၀ ၀န်းကျင်ရှိပြီး၊ ကား မတော်တဆမှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်း ယခုအကြိမ်သည် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း လူသေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဧရာဝတီသတင်းထောက် ခင်ဦးသာနှင့် သတင်းထောက် ငြိမ်းချမ်းတို့ ပူးပေါင်းရေးသားသည်။
Nwar Kyaungthar January 24, 2013 - 8:49 am The Burmese juntas had failed us to have paved roads. Unthinkable loss of life happened because of the juntas’ ignorant and useless policy. Everywhere in the world, Burma is the least developed nation. Why? Not because of the people’s weakness but because of the juntas’ uselessness. Roads are in very poor condition. At the same time, the vehicles on the roads are with sub-standard and not well maintained because of poverty caused by the juntas. We the people are so smart but the junta is so useless.
Reply Aung Zaw Oo January 24, 2013 - 11:19 am တောင်ကုတ် ရဲ့ ၃-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၁၀ လောင်းပြိုင်လူသတ်ပွဲကို ပြန်သတိရစေချင်ပါသည်။ မတရားသောလူသတ်ပွဲကို သည်းခံခြင်းသည် မွန်မြတ်၏။ လက်စားချေခြင်း ကိုဘုရားသခင်မနှစ်သက်။